အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းကူးယဉျကော? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မေးခွန်း: porn အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် porn ကိုကြည့်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
ငါပုံကြီးချဲ့ပေမယ့် porn အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသို့မဟုတ် "ခေါ်ဆောင်သွား" ပုံပြင်များဖတ်နေ porn ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခက်ခဲများနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာကြာစေသည်။ သင်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည် sensitized စွဲလမ်းကြောင်း, dopamine အတွက် spikes ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, မတရားသောနှင့်တိုးမြှင့်နာမငြိမ်နှင့်ဆက်စပ်သောပုံရသည်။ ၎င်းသည်ဆေးပြန်သောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတိုးပွားစေပြီးစွဲလမ်းအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုရှင်သန်စေပြီးကျန်းမာစေပါသည်။ ဤဗီဒီယိုကိုနော Church ချာ့ချ်မှအကြံပြုသည် - က PIED / PMO စွဲမှပြန်လည်ထူထောင်စဉ် fantasize မှ OK ကိုလား?
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အပေါ်သုတေသနတစ်ခုအတှေ့အကွုံကူးယဉျသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်များစွာကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ကွောငျးဖျောပွသ တူညီသောအာရုံကြောဆားကစ် အဲဒါကိုဖျော်ဖြေအဖြစ်။ တစ်နည်းပြောရရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်သင်၏စွဲလမ်းစေသောလမ်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ လေ့လာမှုမှ - စိတ်ကူးနှင့်ကွပ်မျက်ခံရလုပ်ရပ်များအတူတူပင်အာရုံကြောအလွှာဝေမျှပါနဲ့? - သုတေသီများကောက်ချက်ချ:
"အချက်အလက်များ၏အဲဒီသုံးခုသတင်းရပ်ကွက်အချို့အတိုင်းအတာအထိ, စိတ်ကူးနှင့်လုပ်ရပ်များရှယ်ယာကွပ်မျက်ခံရသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုဆုံအတူတူဗဟိုအဆောက်အဦများကိုပေး။ "
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယျသို့ကနေဖိုရမ်ပေါ်မှာယောက်ျားတွေကိုမှန်ကန်အလားအလာမိတ်ဖက်အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြု. autopilot အပေါ်သွားနှင့်လတ်တလောတွင် porn / ညစ်ညမ်းအမှတ်တရများအားလုံးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတာထက်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်, ပြောကြသည်။ အပိုဒ်: သူမည်သူမဆိုထဲသို့ရုံဒါကမင်: ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်လိင် Fantasy ၏သက်ရောက်မှု (2017) - ကွင်းဆက်တစ်ခုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုသုံးခုအရလိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏တန်ဖိုးကိုလျော့နည်းစေသည်၊
မေးခွန်း: အဘယ်အရာကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျကော?
ယောက်ျားတွေကပြောတာကစစ်မှန်တဲ့လိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသားများကိုကန့်ကွက်ခြင်းဟာ reboot လုပ်စဉ်ယေဘုယျအားဖြင့်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လူအများစုကစိတ်ကူးယဉ်အားလုံးကိုရှောင်ရှားခြင်းကို ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီး 'လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများ' မဟုတ်ဘဲတကယ့်လူများကိုမြင်ခြင်းကဲ့သို့သောအမြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြိုဆိုကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူသားများ eons များအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ပါပြီ။ အပေါင်းဘက်၌, သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိပါကသင်၏ ဦး နှောက်ကိုမှန်ကန်သဘောတူညီမှုသို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သော့မှဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ် သင်အကြိုက်ဆုံး porn ကးသို့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ထားပါ။ သငျသညျရပါမည်ဆိုပါကဒီတစ်ခါလည်း, အစား vanilla ကစောင့်ရှောက်လော့။
ငါက fellas ကထွက်နေသေးတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးခါနီးတွင်အနားယူနေသည်။ အလုပ်များနေပုံမရ (သင်မည်သို့သိနိုင်သည်) အလုပ်နှင့်လိင်အကြောင်းစဉ်းစားမိသည်။ ထိုအခါငါကထိမိခဲ့တယ်: ငါလှပသောမိန်းမများစဉ်းစားရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုလို။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာ horny ဖြစ်ရတာကပျော်စရာကောင်းပြီးဘဝကိုအတည်ပြုပေးခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ဘ ၀ ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ပြbeနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါဟာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့သဘာဝအခြေအနေ၊ စစ်မှန်တဲ့လူသားဖြစ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ - သင်သည်နေ့စဉ် PMO သံသရာတွင်ဖမ်းမိပါကသင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားမှာအမြဲတမ်းလိုအပ်နေသောပြasနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်မြင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ horny ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေတဲ့သဘောပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့စတင်ခံစားလိုသည့်ဆန္ဒပြင်းပြမှုသည်ကွယ်ပျောက်သည်အထိချက်ချင်းပင်မိမိကိုယ်ကို yanking စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ပြီးခဲ့တဲ့ညကငါသိခဲ့ရတယ်၊ အကယ်၍ မင်းကအဲဒီမီးကိုအမြန်မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ မီးအားလုံးဟာလူအားလုံးကိုအဆက်မပြတ်လောင်ကျွမ်းစေသင့်တယ်၊ ငါတို့ကိုအောင်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုတွန်းပို့နေတယ်ဆိုတာပဲ။ နွေးထွေးမှုအတွက်တောင်း။ အောင်မြင်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာယောက်ျား၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးအသက်ရှင်ရတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မအသက်အရွယ် 13 အားဖြင့်အစစ်အမှန်မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbating ရပ်တန့်ငါနောက်ကျောကိုကြည့်ကြောင်းယခုနားလည်သဘောပေါက်။ အစစ်အမှန်မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်, ငါ့အမြင်တွင်, ဖြစ်ကောင်းနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလရာအရပျကိုယူတော်မူကြောင်းကိုငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား၏ကျန်းမာပုံမှန် M ကဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် M ကရန်သင့်အာရုံအပြောင်းအလဲများကို pixel form မှာမှားယွင်းသောမိန်းမနှင့် novelty ဖို့အခါပြဿနာများစတင်ပါ။ mid-အထက်တန်းကျောင်းငါကအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်းများတစည်းခဲ့သောငါ၏ပထမဦးဆုံး porno ကို VHS တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်မ လိုအပ် ငါ 18 ခဲ့ချိန်အထိကျွန်မရဲ့ Hi Speed ​​ကိုအင်တာနက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလို့ M နှင့် O. အဘို့ငါကံကောင်းဖြစ်၏။
ထိုအခါငါငါ2နှစ်အဘို့လိုက်။ ခဲ့ကြရမည်ဟုမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် (ED နှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အခြားချိတ်ဆက် ups တွေအများကြီး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမိန်းကလေးနှင့်အတူရချင်တယ်) ဒါကြောင့်နောက်တဖန်ငါ porn ကိုငါ့ ED အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါထင်ဒါကြောင့်ငါစောင့်ကြည့်တော့ဘူး ငါနောက်ဆုံးဒီမိန်းကလေးနဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီး ၃ ပတ်ကြာအောင်လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဒစ်ခ်ဟာညလုံးပေါက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီမိန်းကလေးနှင့်တစ်ပတ်အကြာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါသို့သော်ပထမမိန်းမအိုစင်ကြယ်အောင်လိင်အင်္ဂါကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း (အသက် ၂၃ နှစ်) မှရရှိခဲ့ပြီးသင်၊ ယောက်ျားအားလုံးကိုပြောပြပါရစေ၊ လုံးဝသူမနှင့်သင်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်။
reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောအမျိုးသားများကဤတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
(ဤကောင်လေး၏ဇာတ်လမ်းသည်အခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှဖြစ်သည်။ သူသည်သင် reboot လုပ်စဉ်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၊ အမျိုးသမီးများကိုကြည့်ရှုရန်ပင်အကြံပေးသည်။ သူသည် ၃ ပတ်ကြာသည်ကိုပြန်လည်စတင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၂၁ ရက်ကြာသီးခြားစီနှစ်ခုလိုအပ်သည်။ )
ကြိုတင်ကြာမြင့်စွာတင်ထားသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကူညီနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုခုရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ငါတွေ့ရှိခဲ့သောဤအရာကိုရိုက်နှက်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာဤသို့ဖြစ်သည် - သင်ခဏတာမှစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရမည်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်နေခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါဟုငါပြောသောအခါ“ လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုမကြည့်ပါနှင့်” ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ သင်လိုလျှင်အမျိုးသမီးများကိုမကြည့်ပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်သင်မေးမြန်းနိုင်သနည်း ငါရှင်းပြလိမ့်မယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုစွဲလမ်းနေပါကသင့် ဦး နှောက်၏ dopamine သည်လုံး ၀ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဒါကပထမနေရာမှာပြfirstနာတွေဖြစ်စေတယ်။ ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် porn နှင့် MB ကိုစွန့်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကအစကောင်းပါတယ်
သို့သျောလညျး, ငါရှာတွေ့ငါအမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူကဖြစ်စဉ်ကိုအကြီးအကျယ်နှေးကွေးစိတ်ကူးယဉ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာစာပေများကိုသင်ဖတ်ရှုပါက dopamine ပမာဏအနည်းငယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန် (ဥပမာချောကလက်ကိတ်မုန့်တစ်ထည်လိုချင်ခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင်ကိစ္စများတွင်) အနည်းငယ်သာထုတ်လွှတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ ယင်းကတိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
ဤသို့ပြောပါ - သင်သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရက်ဖြတ်ခြင်းခံရလျှင်သူတို့၏ကွန်တိန်နာများကိုတစ်နေကုန်စိုက်ကြည့်မည်လော။ ဖြစ်ကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွေးဆောင်မှုကိုဖန်တီးပေးလို့ပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအလားတူအလုအယက်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ သင်မြင်တဲ့အတိုင်း? သင် P နှင့် MB မှထွက်လိုက်သည်နှင့်သင်ပုံမှန်အမျိုးသမီးများကိုကြည့်နေပြီး၎င်းတို့ကို porn မြင်ကွင်းများတွင်မြင်ယောင်နေလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုလုံးဝမဖြတ်နိုင်ပါ။ ဒါဆိုငါဘာတွေရနေတာလဲ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်က“ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းမှု = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုများ” သည်ခေါင်းမာသည့်ခေါင်းစဉ်များနှင့်အလားတူစာမူကိုဖတ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူစုံတွဲတစ်တွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြhadနာရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏နည်းဗျူဟာမှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လုံးလုံးလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏မည်သည့်ရုပ်ပုံများကိုမဆိုကြည့်ခြင်း၊ သူတို့အတွက်၎င်းသည် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အထိသာအလုပ်လုပ်သည်။
ငါကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့၊ ငါ“ ပျောက်ကင်းသွားပြီ” လို့ထင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားတယ်။ အခုငါဒီမဟာဗျူဟာကိုပြန်သွားပြီ။ ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲ အနည်းဆုံး ၁၄-၂၁ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘာမှမကြည့်ခဲ့ပါ၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ပုံများမရှိ။ ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေတောင်မှမကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ ဦး နှောက်ကိုပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲကုသနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးချင်လို့ပါ။ လုံးဝ! ရက်သတ္တပတ်များစွာလုံးလုံးရှောင်ကြဉ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ငါကငါ့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီပေးခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့အတွေးတွေကိုငါ့ခေါင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
P နဲ့ MB ကိုဖြတ်ရုံကငါ့အတွက် ၁၀၀ ရာနှုန်းမဖြတ်ခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်မလိုချင်သော ဦး နှောက်သက်ရောက်မှုများကိုရှင်သန်စေသည့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြစ်သည်။
နှစ်ဦးစလုံးကြိမ်ငါအဲဒါကိုကိုယ်နှိုက်ကို reset ငါ၏အလိင်စိတ်ခဏသွားကြောင်းနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်, ပြီးတော့ရုတ်တရက်အားလုံးဒီနည်းလမ်းကိုပြုလေ၏။ ဘယ်နေရာမှာတော့ပါ။ အကြီးခံစားရတယ်။
မည်သည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းဆွေးနွေးနေသောအတွေ့အကြုံရှိ rebooters များနှင့်အတူ Thread အဆိုပါ "အဘယ်သူမျှမ arousal"နည်းလမ်း - ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၏ Celibacy
Re: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကော။ ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သောအရာအနည်းငယ် (ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်မဟုတ်သလိုမည်သည့်အာဏာပိုင်မျှမဟုတ်၊ သာမာန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ):
၁။ ဟုတ်တယ်၊ လူတွေဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေ၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn က ED ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေများပြားလာတဲ့အချိန်ကတည်းကမှစခဲ့တာပါ။ ထို့ကြောင့် porn နှင့် ED အကြားတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ED အကြားဆက်စပ်မှုသိပ်မရှိလှပေ။ အဘယ်အရာကိုမျှမတောင်းဆိုမီကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာမှာယခုနှင့်ယခုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်များဖြစ်သည်။
အကန့်အသတ်မဲ့၊ အလွန်နှိုးဆွသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခွင့်ရသူတစ် ဦး သည်တကယ့်ဘဝအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ရန်သူ၏ ဦး နှောက်ကိုညှစ်ရမည့်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်မည်မျှပါဝင်နိုင်သနည်း။ ဤဖိုရမ်ရှိသုံးစွဲသူများအများစုယုံကြည်သောနောက်အချက်တစ်ခုမှာ porn မပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝသည်စိတ်ကူးယဉ်အစားစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များပါ ၀ င်ခြင်း၊ ပိုမိုကျန်းမာမှုရှိခြင်း၊
သို့သော်လွန်ခဲ့သောအနှစ် (၂၀) ​​ကျော်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်ကြမည်နည်း။ သူတို့မှာဒီညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခွင့်မရတဲ့အတွက်၊ (အထက်ပါဖော်ပြချက်ကိုယုံကြည်ဖို့ဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့သောကြောင့်)၊ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ ဟာကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်ကအများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆရမည်။ ငါဆွဲယူနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနိဂုံးမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုဖြင့်ပင်အနုတ်လက္ခဏာအဖြစ်မရှုမြင်သင့်ဘဲ ED ၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။
၂။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတွင်အလွန်များလွန်းသည်။ နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာသီအိုရီအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်ခြင်းသည်တစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောအလျင်အမြန်နှင့်ပိုမိုပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကိုဖြန့်ဝေရန်အတွက်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုစားသုံးရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်း၊ သင်၏ခန္တာကိုယ်နှင့်စိတ်များသည်အချိန်အတော်အတန်တည်ငြိမ်သောဟန်ချက်ညီနေသည်ဟုမခံစားရမချင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ မတည်ငြိမ်သောဟန်ချက်ညီမှုသည်လှည့်စားနိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိ! ထို့နောက်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုသိရှိခြင်းသည်မိမိဆန္ဒအလျောက်မည်သည့်အလေ့အထကိုမဆိုလုပ်ကိုင်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၃) Fantasy ကိုအစပိုင်း၌အန္တရာယ်ရှိသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အစ (ပထမလအနည်းငယ်) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်း၌တွေ့ရသောညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများ မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်အပျော်အပါးနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအနည်းငယ်ထုံနေခြင်းကစိတ်ကူးယဉ်ကိုကိရိယာတစ်ခုအနေနှင့်အသုံးပြုရာတွင်လွယ်ကူသောလမ်းကိုလျှောက်စေသည်။ ထိုပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးသည်အဝတ်အချည်းစည်းမည်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ပါ။ ထိုလှပသောမိန်းကလေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်သောလိင်မှုရှိခြင်းကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ ဖြေရှင်းချက်လား။ သင့် ဦး နှောက်က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းထားတာကိုပြန်သတိရကြစို့။
အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ ဒါကသူ့ဟာသူစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၏လုပ်ရပ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိအညစ်ညမ်းအတိတ်အပေါ်အခြေခံပြီးကူးယဉျစောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူသာသောအရာတို့ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေမည်နေချိန်မှာတစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုသဘာဝကစိတ်ကူးယဉ်သူတစ်ဦးကကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ်ဦး, ဒုက္ခသို့ကိုယ်တော်တိုင်မရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာသင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ သင်၏စိတ်သည်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်မိလျှင်အစွန်းရောက်ခြင်း (သို့) လက်တွေ့မကျခြင်းများမပြုလုပ်ဘဲသင်ခွင့်ပြုသင့်သည်။ သေချာပေါက်စိတ်ကူးယဉ်ကိုမအားဖြည့်ပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုမေးပါကဤသို့သောအတွေးမျိုးကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်လိင်စိတ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ တကယ်တော့သင်ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေဟာအတင်းအကျပ်နဲ့သဘာဝမဟုတ်တော့ဘူးလား။
ငါနဲ့အရင်မျိုးဆက်တွေအကြားအဓိကခြားနားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ porn ကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ပဲ။ ယောက်ျားဟောင်းကြီးတွေကအစမှာစိတ်ကူးယဉ်ပြီးအဲဒီမိန်းကလေးကိုအိပ်ရာပေါ်တင်ဖို့ကြိုးစားကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုတော့ဘူး (ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့သိပ်မများပါဘူး) ။ ရေရှည်တွင်ဆုလာဘ်သည်စစ်မှန်သောလိင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကဆက်ဆံရေးကိုဆက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်သို့ပြန်သွားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသောထိုမိန်းကလေးကိုနမ်းဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မည်ကိုစဉ်းစားမိသည်ထက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးယဉ်ကြသည်။
ငါကလုံးဝကစိတ်ကူးယဉ်အဘယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပင်ကိုအဝေးမှ P ကိုပုံနဲ့ဆင်တူပါကစားပွဲပယ်ဖြစ်သင့်သည်။ အကြောင်းရင်းနှစ်ခု:
1) Porn စိတ်ကူးယဉ် relapsing ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်
၂) ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည် rebooting လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ သင့် ဦး နှောက်သည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်သင့်စိတ်ထဲတွင်ရှိသောပုံရိပ်များကိုခွဲခြားခြင်းမပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင့် ဦး နှောက်မှတစ်ဆင့် P ကဲ့သို့သောပုံရိပ်များသည် P. ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ခြားနားသည်
အခုတော့ငါမစဉ်းစားကြဘူးဟုပြောသည် အားလုံး စိတ်ကူးယဉ်မကောင်းတဲ့နှင့်တန်ပြန်သည်။ ငါ reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်း၊ ငါ့ဘဝ၌ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်, ရင်းနှီးမှုရှိသော်လည်းလိင်မပါ ၀ င်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းနောက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ဤစိတ်ကူးယဉ်မှုများတွင်အပြုံးများဖလှယ်ခြင်း၊ လက်ကိုကိုင်ခြင်း၊ ပြန်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ခြေထောက်အနှိပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်တွေဟာတကယ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။ သူတို့ဟာအရည်အသွေးကွဲပြားတဲ့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တွေလို့မထင်ပါဘူး။ ဤသည်အခြားစိတ်ကူးယဉ်အမျိုးအစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်မသာပေမယ့်ငါကတကယ်တော့အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၊ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများ (ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင်) ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှအနားမယူ၊ ဘယ်တော့မှ MO ကိုမတွေးတောပါ။
၁) သင်အမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတွေ့ဆုံခြင်းမဟုတ်သော P ကြယ်များ၊ မိန်းမများ (သို့မဟုတ်ယောက်ျားများ) များမပါ ၀ င်ပါ။
၂။ ၎င်းတွင်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများမပါ ၀ င်ပါ။
၃) ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ (အထူးသဖြင့်လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ) ကိုအာရုံမစိုက်ပါ။
၃) ရုပ်ပုံများကိုတိတိကျကျမဖော်ပြပါ။ ထိတွေ့မှု၊ အနံ့နှင့်အသံကဲ့သို့သောအခြားအာရုံများလည်းပါ ၀ င်သည်
ဒီနေ့ PMO ကိုဆက်မလုပ်ရန်ခက်ခဲလားဟုသင်မေးမြန်းသည်။ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်လွယ်တယ်။ [သူ၏ယခင်ညစ်ညမ်းဝတ်စားဆင်ယင်မှု၌] ထိုမိန်းကလေးများပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကသိသည်။ အဲဒါကိုလက်ခံပြီးငါ့ကိုသူတို့ဆီပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ ဆက်ပြီးသွားပါပြီ အခုငါအိမ်မှာရှိတုန်းက၊ လိင်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကသိတယ်။ ငါထွက်သွားတော့မိန်းမကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကို ဦး နှောက်ကသိချင်ပေမယ့်လိင်မှုကိစ္စမှာသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ M နဲ့အိမ်မှာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဟာမီနူးမှာမရှိတော့လို့ပါ။ ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။
သို့သော်ထိုအချက်ကိုရောက်ရန် ၈ ပတ်ကြာခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်သွေးထွက်သံယိုလူသတ်မှုအော်ဟစ်နေသည်။ တစ်ခါတလေအော်ငေါက်တော့တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါအော်မှမဟုတ်တာ၊ ဒါကနောက်တဖန်အော်ဟစ်လာတဲ့အခါငါ့ကိုတောင်ထိတ်လန့်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်တီဗွီကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာလည်းငါပြောတာပါ။ အိမ်မှာနေပြီးတီဗီမှာမိန်းမကောင်းတစ်ယောက်လာရင်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က“ ဟေ့! ငါ့ရည်းစားကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်သွေးအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Hummana-hummana-hummana ။ ” တဖန်သင်တို့အားလုံးနောက်တဖန်စိတ်လှုပ်ရှားရ။
အိမ်မှာမင်းကိုမိန်းမတွေမသေစေရဘူး။ ဘာမှမရှိဘူး အဘယ်သူမျှမလင်းတ, အဘယ်သူမျှမမျက်နှာများ, အလောင်းတွေမရှိစိတ်ကူးယဉ်မရှိဘာမျှ။ အပြင်ဘက်ကမ္ဘာ - အမျိုးသမီးများ။ သင်၏အိမ် -f* ck ကဲ့သို့ပျင်းစရာကောင်းသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်လိုအပ်သောသတင်းကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းဖြင့်ရရှိသည်။ သွားပြီ
ငါသည်ငါ့စိတ်ထဲထဲကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ် purging နှင့်ထံမှ grubby ထုတ်ယူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပြီအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသို့မဟုတ်ဒါ, ငါပျောက်အထီးကျန်, ရှုပ်ထွေးနီးပါး asexual, စိုးရိမ်နေကြသည်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားခဲ့ရပါပြီ။ မယ်ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ငါ့ဖန်တီးသူများတွင်ယုံကြည်ခြင်း, သဘောသဘာဝနှင့် reboot လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ system ထဲကစိတ်ကူးယဉ်ရယူခြင်းတစ်ခက်တာဝန်အဖြစ်ထွက်စတင်သည်။ ဒါဟာခဏတစ်အပြီးတွင်ပိုမိုလွယ်ကူရဖို့စတင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏လိင်စိတ်တောင်သငျ့စိတျထဲမှာလုံးဝသင့်ထံမှထွက်သွားမှစတင်သည်ကြောင်းသတိပြုမိ။ သငျသညျလိင်အားလုံးကိုအလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်မစိုးရိမ်ထိတ်လန်စတင်ငါလိင်တံမရလဒ်များကိုမှနည်းနည်းနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်အတင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါ fantasize ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ရှိသမျှကိုငါမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆောက်လုပ်ခဲအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာငါအဘို့အနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တူ၏။
တစ်ချိန်ချိန်ကိုယ့်ကိုလုံးဝလွှတ်လိုက်တယ်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖို့ခဲယဉ်းဖြစ်မယ့်လျှင်, ငါအဖြစ်ကောင်းစွာအပန်းဖြေခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းငှါ, ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘိုက်နှင့် ဦး နှောက်နှစ်ခုလုံးတွင် libido အလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ကျွန်ုပ်မှ SH * T ကိုကြောက်သည်) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ညသည်အရုဏ်မတိုင်မီအမှောင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်သည့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်လောက်မှာ၊ လှပသောအမျိုးသမီးများရှိနေခြင်း မှလွဲ၍ လူအများကြားမှာအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ တိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ် သို့သော်ကောင်းသောလမ်းအတွက်! ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အားလုံး၊ လက်တွေ့ကျသောအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြင့်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၁၈) နှစ်သာရှိသေးသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ (တစ်ကိုယ်လုံးအမြင်အာရုံအဆက်အသွယ် မှနေ၍ အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းဖြစ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုလာပြီးလက်တွေ့ကျလာသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုအားနည်းသောစီရင်သူဖြစ်သည်။ အလွန်လက်တွေ့ကျပြီး၊ လူတစ် ဦး ၏ရှုမြင်ပုံစိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားချက်ချင်းပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဗီဒီယိုကြည့်တာကိုမရပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကငါပဲဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ငါစောင့်ကြည့်နေဆဲပါ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာပါ ၀ င်သူဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ငါကစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တဲ့တတိယလူကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။
၎င်း၏တစ်ခုသာအကြံပြုချက်, ဒါပေမယ့်သူကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုသင်မေးလျှင်စိတ်ကူးယဉ်ဆုပ်ကိုင်မှုကြောင့်သင်၏ပြန်လည်စတင်မှုကိုကြာရှည်စွာခံရလိမ့်မည်။ Fantasy ကသင့်ကိုအခိုက်အတန့်ထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးယခုအချိန်တွင်သင်၌ရှိသမျှရှိသည်။ မည်သူမဆိုလုံးဝဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့မထင်ပါ PMO စွဲမှုမှမသက်သာသူတစ် ဦး အတွက်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်ကျန်းမာကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ၊ ငရဲသည်ကျွန်ုပ်မဟုတ်သကဲ့သို့သေချာပါသည်!
စိတ်ထဲတွင်စွမ်းအင်၏အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုပြီးအိပ်ရေးဝဝအိပ်နေသည့်အချိန်တွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်နေသည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းသည်သင်၏အဆီအားနည်းသော ဦး နှောက်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါဟာငါ့ထက်ညစ်ဖို့ခက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ၂ ပတ်အကြာမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ခွေးအူရောဂါရှိနေတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပင်ပန်းခဲ့သည်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မမက်ခဲ့ရင်ငါ PMO နှင့်ငါ့အောင်မြင်မှုအများကြီးလျော့နည်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၎င်း၏နေ့ ၆၀ နှင့်ကျွန်ုပ်ပင်ထိုအရာကိုမသိလိုက်ပါ။
ဘယ်လောက်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုငါမစောင့်နိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ငါ PMO လုံးဝမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ငါဟာအမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အပြင်အွန်လိုင်းအခမဲ့ချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းရှာဖွေနေတဲ့အတွက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်အစပြုခဲ့တုန်းပဲ။ PMO ကိုစွဲလမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည့် ဦး နှောက်ထဲရှိတူညီသောလမ်းကြောင်းများကိုထိုအပြုအမူများကတက်တက်ကြွကြွအကြာကြီးအထိကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။
အခုငါစိတ်ကူးယဉ်ဖို့စိတ်မရှည်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ချိန်းတွေ့ဖို့ဆိုဒ်များနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအချိန်ဖြုန်းဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့အမျှအခြေအနေတွေကအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာသည်။ ငါအဓိကအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်တိုင်းတွင်အလုပ်များရန်ကြိုးစားနေသည်။ အကယ်၍ Im ဟာကွန်ပျူတာရှေ့တွင်တစ်ယောက်တည်းနေလျှင်၊ ငါ haha ​​အချိန်မကောင်းဘူး။ ငါအချိန်ဖြုန်းဆိုဒ်များကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များအရနောက်တစ်နေ့ခံစားရသောခံစားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုကိုငါတွေ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အခြားအမှိုက်သရိုက်များကိုကျွန်ုပ်နည်းလေလေခံစားမိလေဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည်သူ့ဟာသူအပေါ် ဆက်လက်၍ တည်ဆောက်သည်။
ကအနည်းဆုံးတစ်ဦးဖြစ်သူရည်းစားအချို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ငါဆိုလို Id ငါအားကစားရုံမှာမြင်သောမိန်းကလေးတစ်ဦး, etc စတာတွေနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတောင်မှရက်အနည်းငယ်ထက်ပိုသွားကြဖို့က၎င်း၏ကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရပေးနိုင်ပါတယ်, ပြုသောသူ ပင်0လလောက်တစ်ရပ်2ရှိခြင်းမဟုတ်ပြီးနောက်သူတို့လိင်ဆက်ဆံချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်စဉ်းစားမရ! ငါ့သော်လည်းဖြစ်ပျက်သည့်အခါအခြားအရာတစ်ခုခုစဉ်းစားကြိုးစားပါ။
ဟေးလူတိုင်းငါဖိုရမ်များကိုလှည့်ပတ်နေခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တင်သည့်သတင်းများမကြားရသေးပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းဝေမျှချင်ပါတယ်။ ငါ၏အ rebooting ကြိုးစားမှုစဉ်အတွင်း။
ဒါကြောင့်ငါ ၁၃-၁၄ လောက်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​ကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့တကယ်ကိုတိုတောင်းတဲ့ကလစ်များနဲ့စခဲ့တယ် (ကျေးဇူးတင်စရာ၊ streaming porn မရရှိနိုင်ဘူး) ။ နောက်ဆုံးမှာအင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ပို၍ မကြာခဏစကြည့်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင်အပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးရန်အခွင့်အရေးရခဲ့သော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ သုံးလခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်၊ အားစိုက်ထုတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
လာမယ့်4နှစ်တွေငါရံဖန်ရံခါငါ၏အစိုက်ထူထိုးဖောက်မှုလုံလောက်ခိုင်မာတဲ့ပါလိမ့်မယ်, သာမန်လိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသို့သော်တကယ်ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးချိန်းတွေ့စတင် 25 လှည့်အလွန် good.When ငါခါတိုင်းလိုပြဿနာများရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါနှင့်အတူကဆက်စပ်ခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှ စိုးရိမ်ပူပန် (ကျနော်နေဆဲကျွန်တော်တို့အများစုကအဘို့ဤကိစ္စကိုမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ရသော), သူမကအရမ်းနားလည်မှုခဲ့, ငါ cialis များအတွက်ဆေးညွှန်းတယ်သည်းခံခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားအများကြီးမှတဆင့်ကိုယ့်သူမ၏နှင့်အတူအတန်ငယ်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည်။ ငါ, ငါ၏ porn အသုံးပြုမှုကိုအများကြီးလျှော့ချ (သင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခက်ခဲ porn မှာအများကြီးကြည့်ဖို့) နှင့်ငါ၏အလိင်တံနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘဲငါ့လက်ထက်လိင်အင်္ဂါမှထိခိုက်ဖြစ်လာကျွံသွားမည်အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဤ attribute ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာငါပြန် porn သွား. တူညီတဲ့အဟောင်းပြဿနာများစင်ပေါ်တက်ခြိုးဖဲ့၏။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤဖိုရမ်နှင့်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိမိ ခဲ့၍ ပြန်လည်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၃၅ ရက်လုပ်ပြီးတိုးတက်မှုကြီးအချို့ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လျောက်ပတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံနိုင်ခဲ့သည်…များသောအားဖြင့် Cialis မှကူညီသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ PMO သို့ပြန်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပြissuesနာများကိုနောက်တဖန်ပြန်လာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါက porn ကိုလုံးဝဖြတ်ပစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတုန်းပဲ။ ငါသည်လွန်ခဲ့သော ၇ လအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသော်လည်းမကြာသေးမီအချိန်အထိစိတ်ကူးယဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါ့အတွက်, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ငါ့စိတ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကောင်းကောင်းပြန်ကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်၊ အခုတော့ငါဟာ PMO ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မရှိတဲ့နေ့ ၂၂ ရက်ကိုရောက်နေပြီ။ တိုးတက်မှုတွေကိုသတိပြုမိတယ်။ ငါကနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်မိဖို့၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးနောက်ငါဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြည့်ရဲဘူး။ ငါကြိုးစားလူတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
Note again.CLIFF ကျေးဇူးတင်ပါသည်: ငါ့အတှေ့အကွုံမြားစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခုနှစ်တွင် PMO ကဲ့သို့တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
LINK - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၆၉ ရက်မြောက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီး၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစိတ်ကူးယဉ်များကိုလျစ်လျူရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
ငါ၌အတိတ်ကာလများစွာသော fetishes ရှိခဲ့, နှင့်အစောဆုံးသူများနီးပါးလုံးဝငါသို့ဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ကူးယဉ်သကဲ့သို့ငါ၏စိတ်ထဲကနေသွားပြီ။ ငါဇန်နဝါရီလလယ်ကတည်းက PMO ၏သားရဲကိုတိုက်လှန်ခဲ့ပေမယ့်အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်ပေမယ့်သူတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုရှောင်ရှားရန်အရင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
မင်းအကြံပေးတာကမင်းကိုသတိမထားမိဖို့၊ စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ သင်အဲဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုသတိရလာတိုင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။
သဘာ ၀ ကိုအထူးသဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ နေ၊ ဘယ်မြက်အစိမ်း၊ သင်စားသောအရသာရှိသနည်း။
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ခြင်းအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားတိုင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအားအင်ပြည့် ၀ စွာမောင်းနှင်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏အလောင်းများကိုတွေ့မြင်ခြင်းကသင့်အားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးသင့်အား screen ပေါ်ရှိ pixel များထက်မဟုတ်ဘဲစစ်မှန်သောဘဝရှိအမျိုးသမီးများကသင့်ကိုဖွင့်လာစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fantasy: အဆိုပါပိုသင့်အနေဖြင့်ပိုမို Scratch သင်ဟာယားယံ
အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုငါ (ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့ဘူး) ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းရှောင်ရှားရပါမည်နည်း
အစပျိုးခြင်း၏စုစည်း (porn ဖြတ်ယောက်ျားတွေများကကောက်ယူ)
စိတ်ကူးနှင့်လုပ်ရပ်များအတူတူပင်အာရုံကြောအလွှာ share ကွပ်မျက်ခံရသလား? (1996)